Nagu saabsan - Dongguan City BiGa Mashiinka Mashiinka Mashiinka Co., Ltd.
Dongguan City Biga shabaggeedii Makiinado Co., Ltd.waxaa la aasaasey 1996, waan sii soconeynaa, hada baaxada ganacsiga ugu weyn waa: cilmi baarista iyo soo saarida miisaanka toosan, habka magnetka ee loo yaqaan 'Digital Readout system', mashiinka wax shiida dusha sare, mashiinka wax shiidaya dusha sare, mashiinka qodista godka EDM, Mashiinka goynta siligga ee EDM, aaladda wax lagu cabiro sawirka, 3 dhidibka / 5 dhidibka xarunta mashiinka, mashiinka goynta leysarka, mashiinka carves-ka shiidaya iyo mashiinka EDM. Marka laga hadlayo adeegga iibka kadib, Taageerada khadka tooska ah, Taageerada Farsamada Fiidiyaha, Qaybaha dayactirka bilaashka ah, Rakibaadda aagga, hawlgelinta iyo tababarka, Dayactirka iyo adeegga dayactirka ayaa la bixin doonaa. Sababtoo ah hawlgal aan habboonayn oo isticmaale u horseedaya waxyeelo, qalabka dayactirka ayaa lagu dalacayaa kaliya qiimaha qiimaha iibsadaha.
Sanadkii 2000, waxaan ka dhisnay warshad EDM Dongguan, illaa iyo hadda waxaan leenahay 20 sano oo khibrad wax soo saar ah iyo 10 sano oo dhoofinta taariikhda ah. Dhamaan geeddi-socodka waxaa ka mid ah naqshadeynta qalabka mashiinka, isku-dubbaridka iyo kormeerka saxda ah waxay si adag u waafaqsan yihiin habka maaraynta SOP (Nidaamka Hawlgalka ee caadiga ah). Marka la eego alaabta ceeriin, waxaan isticmaalnaa qalab dayactir oo tayo sare leh oo ka yimid Jarmalka, Japan, Taiwan iyo Switzerland. Alaab-qeybiyaha ku habboon waa inuu noqdaa mid la isku halleyn karo, oo leh karti iyo dareen mas'uuliyad labadaba; Ku saabsan xakamaynta tayada wax soo saarka, kormeerka qalabka horumarsan ee ka socda Mareykanka (API) iyo Japan (NIKON), tayada si wanaagsan ayaa loo damaanad qaaday.
Shirkadeena waxay haysaa siyaasada adeegga bandiga iyo baacsiga tayada cajiibka ah laga bilaabo heer sare ilaa kaamil. Waxaan had iyo jeer u hoggaansameynaa adeegga muuqda ee isku dubaridan sayniska iyo tikniyoolajiyadda casriga ah. Si loo xaqiijiyo ujeedooyinkan, shirkadeena waxay sameyn doontaa barnaamij adeeg shaqsiyeed ah iyadoo loo eegayo baahida macaamil kasta, sidaas awgeedna ka caawineysa isticmaaleyaasha inay gaaraan yoolalka si sax ah.
Ganacsigeenu wuxuu ka kooban yahay Hong Kong, Taiwan, Singapore, South Korea, Turkey, Southeast Asia, Middle East Asia, India, Europe, America, iwm. Waxaan ku bixin karnaa adeegga dayactirka ee Vietnam. Haatan waxaan ku raaxeysaneynaa shabakad adeeg guri oo dhammaystiran. Gobollada waaweyn, oo leh xafiisyo iyo waaxyo adeegga iibka kadib ah, waxay bixiyaan adeegga fasalka koowaad ee macaamiisha. Waxaan si kal iyo laab ah u rajeyneynaa una balan qaadeynaa in dadaaladeena ay qancin doonaan macaamiisheenna.
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dusha Sare, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dusha sare, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Hal-Dhamaystiran, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Cagaaran, Nooca Gawaarida Mashiinka Mashiinka, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Lagu Dhufto Double-End,